XOG XASAASI AH: RW Kheyre oo si deg deg ah shaqada uga tagaya + Sababta | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG XASAASI AH: RW Kheyre oo si deg deg ah shaqada uga...
XOG XASAASI AH: RW Kheyre oo si deg deg ah shaqada uga tagaya + Sababta
Waxaa jira guux ah inuu shaqada isaga tagayo Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo mudo ku dhow saddex sano wada shaqeyno ka dhaxeyso madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdulaahi Farmaajo.
Inkastoo dhab ahaanshaha warkan la hubin haddana Hotelada magaalada Muqdisho ee ay siyaasiyiinta,waxgaradka iyo dadka u shaqeeya Dowladda isugu yimaadaan waxaa si aad ah looga hadal wararka sheegaya iscsilaada Ra’iisal wasaare Kheyre Xasan Cali Kheyre iyo inuu iskiisa shaqada uga tagayo.
Dhanka kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu jiro khilaaf gunta hoose ka soo bilowday oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre kaasi oo salka ku haya arrimo masiiriga ee dalka iyo awooda Labada xafiis ee dalka ugu sareeya.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame oo taageerayaashiisa kula hadlayay dalka Jarmalka ayaa sheegay inuu jiro khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaarahiisa,isagoona sabab uga dhigay in Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre uusan ka qeyb gelin shirkii madaxweynaha uu la yeeshay Xisbiyada siyaasadda ee dalka,kaas oo abaabulkiisa uu lahaa Taliyaha Hay’adda Nabad sugida Qaranka Fahad Yaasiin.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay u balan qaaday inuu ilaa iyo xad xakameynayo khilaafka isaga iyo Ra’iisal wasaarihiisa,islamarkaana mudada uu xafiiska joogo si wanaagsan u wada shaqeyn doonaan.
Sidoo kale, madaxweynaha ayaa magaalada Nairobi ka sheegay iney wada dhammeysan doonaan mudada halka sano ah ee Dowladiisa u hartay Wasiirkiisa koowaad ee dalka Xasan Cali Kheyre,waxyaabaha Dowladda Farmaajo ayaa waxaa qeyb ka ah wada shaqeynta Ra’iisal wasaarihiisa kala dhaxeyso.